विपिन देव काठमाडौं, ९ माघ
पॉचौं रसियाना संवाद सन् २०२० जून १४–१६ मा नयॉ दिल्लीमा सम्पन्न भएको छ । विगत पॉच वर्षदेखि अब्जर्भ रिसर्च फाउडेन्सन र भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयको तत्वावधान रसियाना संवाद आयोजना भएको छ ।
सयभन्दा बढी देशको प्रतिनिधित्व गरिरहेका रसियाना संवादमा बाह्र मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीहरूले सम्बाेधन गरेका छन् भने संसारका ख्याति प्राप्त ३० वटा थिंक टंयाकका चिन्तकहरू विश्वका जल्दाबल्दा मुद्दाहरूलाई यस संस्करणमा प्रवेश गराएका छन् ।
८० वटा सत्रले संसारका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूको चिरफार गरेका छन् भने १०२ वटा अन्तर्क्रियाहरूले समस्याहरूको सामाधानतर्फ आलोकित गरेका छन् । यस संवादमा सात जना पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्षहरूको समेत सहभागिता भएको हुँदा अझ महिमामय बनेको छ ।
वास्तवमा रसियाना संवाद आयोजनाको कारक तत्त्वमाथि चर्चा गर्दा के आँकलन गर्न सकिन्छ भने पनि राष्ट्र जबसम्म वैचारिक चिन्तनको थलो हुँदैन, तबसम्म त्यो राष्ट्र महाशक्तिको बाटामा लम्कन सक्दैन ।
मानव सभ्यताको उषाकालदेखि नै यो अभ्यास भइरहेको पाइन्छ । अक्सर्फोड, क्याम्ब्रिज, हावर्डजस्ता विख्यात शैक्षिक संस्थाहरू मुख्य दायित्व चिन्तनको थलो बन्नु नै हो । हुनतः शास्त्रार्थ पूर्वीय चिन्तनका मौलिक बाैद्धिक अभ्यास हुन् ।
पाटलीपुत्र र तक्षशिला चिन्तनका महाकुम्भ नै थिए । यही शास्त्रीय परम्परालाई आधुनिक परिवेश र परिस्थितिअनुसार रसियाना संवादले मानव जीवनको विभिन्न पक्ष, समस्या, चुनौती, कार्ययोजना, नीति र रणनीति माथि बहस चलाउने गरेको छ ।
संसारका भगीरथ व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको रसियाना संवादमा कला, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, राजनीति कूटनीति, सामरिक कौशल, धर्म, पर्यावरण, वातावरणीय, लैङिक, युद्ध, शान्ति जस्ता अनेकौ मौलिक मुद्दाहरूमा बहस गरिन्छ ।
रसियना संवादको वैचारिक अंकुर गान्धी दर्शनवाट पनि प्रभावित रहेको पाइन्छ । गान्धीले भनेका थिए–मेरो घरका सम्पूर्ण झ्याल र ढोकाहरू खुलेको हुनुपर्छ । जसबाट संसारको सम्पूर्ण विचार र विमतिलाई महसुस गर्न सकूँ तर यसको मतलब यो होइन कि बाहिरको हावा र हुरीले मलाई दिग्भ्रमित गराउन सकोस् । अर्थात् रसियाना संवादले विभिन्न विचार र मान्यतालाई उचित स्थान दिएको छ ।
कार्यक्रम सुरुवातमा भारतको परराष्ट्र मन्त्रीले भारतको दृष्टिकोण जाहेर गरे । डा. एस जयशंकरले भारतको परराष्ट्र नीति परिवर्तित भएको उल्लेख गर्दै वर्तमान अवस्थामा प्रतिक्रियात्मक कूटनीतिभन्दा पनि एजेण्डा सेन्टरको रूपमा रहेको जिकिर गरे ।
उनले भारत वर्तमान बदलिँदो परिवेशमा विश्व अर्थनीति र कूटनीतिलाई मार्गदर्शन गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको जिकिर गर्दै संसारका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू आतङ्कवाद, जलवायु परिर्वतन, सामुद्रिक सुरक्षा, कनेक्टीभिटीजस्ता संसारका मुद्दाहरू सम्पूर्ण महाशक्तिहरूसँग कॉधमा कॉध मिलाएर अगाडि बढ्ने वाचा गरे ।
भारतले अरू राष्ट्रहरूलाई गर्दै आएको सहयोगको चर्चा गर्दै डा. जयशंकरले हालसम्म भारतले सुरु गरेको १ सय ४० वटा विकासका बृहत् योजनाहरूमा ५३ वटा पूरा गरिसकेको र अरु याेजनाहरूकाे काम पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको जानकारी गराए ।
बंगलादेशको बन्दरगाह र रोड निर्माण, अफगानिस्तानमा विद्युत र सडक, अफ्रिकी मुलुकहरूमा हाइड्रो योजना, इथियाेपियामा चिनी कारखाना यसका प्रतिनिधि उदाहरणहरू हुन् । भारतको परराष्ट्रनीतिको चर्चा गर्दै डा. जयशंकरले भारतको सम्वन्ध चीन, रुस र अमेरिकाँंग (जीटुजी) सरकारदेखि सरकारसम्म (बीटुबी) कर्मचारीदेखि कर्मचारीसम्म र (टीटुटी) प्रविधिदेखि प्रविधिसम्म रहेको जानकारी गराए ।
रसियाना संवादको केन्द्र विन्दुमा रहेका व्यक्तित्व इरानका परराष्ट्रमन्त्री महम्मद्ध जावेद जारीफ थिए । सारा सहभागीहरू वर्तमान खाडी समस्या इरान, इजरायल र अमेरिको द्वन्द्वमा इरानको अधिकारिक धारामा बुझ्न उकुसमुकुस भइरहेको अवस्थामा इरानका परराष्ट्र मन्त्रीले वडो संयमित र सभ्य ढङले आफ्नो क्रोध र आक्रोसलाई सौम्य र सम्यक तरिकाले प्रस्तुत गरे ।
अर्थात् अमेरिकाको गतिविधिलाई कटाक्ष गर्दै ट्रम्पलाई अज्ञानता र अहंकारको प्रतिमूर्ति रहेको वताए । अमेरिका अफगानिस्तान, इराक, सिरिया र लेवनानमा पनि पूर्ण रूपमा असफल रहेको भन्दै आउने दिनमा खाडी क्षेत्रबाट अमेरिकाले आफ्नो सैनिक अस्त्रशस्त्रलाई हटाउन अर्को विकल्प नरहेको कुरा उनले उद्घोष गरे ।
रुसी परराष्ट्रमन्त्रीले रसियाना संवादको आयोजनामाथि प्रकाश पार्दै के भनेका छन् भने, (व्रिकस) (संघाई) (जी ट्वान्टी) जस्ता रसियाना संवादले विश्वव्यापी परिचय बनाएको छ । रुसी मन्त्री सेगरी ल्वायरोभले भारतसँग रुसको मैत्री अटल र अटुट रहेको चर्चा गर्दै कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिए । तर रसिमाना संवादमा मानव समस्याको मौलिक मुद्दाहरूमा व्यापक बहस र चर्चा भएको पाइन्छ ।
त्यसमध्ये एउटा चहकिलो शीर्षक थियो ‘२१ औं शताब्दीमा सडक शक्तिको भूमिका ।’ यस शीर्षकमा विभिन्न देशका सरकारका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरे । सडक शक्ति २१औं शताब्दीको सबभन्दा ठुलो शक्ति रहेको कुरा महसुस गर्दै हङकङको प्रदर्शन, इरान र इराकको प्रदर्शन, वासिङटन डिसीको प्रदर्शनले विश्व संवाद र राजनीतिलाई दिशानिर्देश गरेको कुरा वक्ता र स्राेताले अनुभूति गरे ।
रसियाना संवादमा चर्चित पुस्तक ‘एवसेन्ट डाभलोग’ ले यथेष्ट चर्चा पाए । सिङ्गापुरका शोधार्थी अभित मुखर्जीद्वारा लिखित पुस्तकले आजको संसारमा राजनीतिज्ञ, सैनिक र कर्मचारीतन्त्रवीच खुला संवाद नहुनुले नै संसारमा धेरै समस्याहरू भइरहेको विषयमा व्यापक बहस भयो ।
त्यस्तै, ख्यातिप्राप्त न्यूजिल्याण्डका पूर्वप्रधानमन्त्री हेलेन क्लार्कलगायत अरु मूर्धन्य महिला नेतृले वर्तमान विश्वमा महिलाको अवस्थाका बारेमा चर्चा गरे । नेतृ हेलेन क्रार्कले आफ्नो सारगर्भित व्याख्यानमा आफ्नो अनुभवलाई उल्लेख गर्दै के भनिन् भने कुनै पनि संगठन र योजनामा महिलाहरू बहुसंख्यक भएको अवस्थामा भ्रष्टाचार कम हुने गरेको छ ।
त्यस्तै, अर्को रोचक विषयवस्तु थियो– युरोपको भविष्य । यो विषयमा हंगेरीका मन्त्री पिटर सिजिराटोले अगामी दिनमा जर्मनी र फ्रान्सको नीति र योजनामा नै युरोपियन युनियनको भविष्य रहेको जानकारी गराए ।
रसियाना संवाद ‘भगवान् र भूराजनीति’ पनि एउटा रोचक विषय थियो । अर्थात् धर्म र राजनीतिबीच लक्ष्मण रेखा हुनुपर्दछ भन्ने भनाइ पनि वक्ताहरूको थियो । त्यस्तै, पर्यावरणसम्बन्धी रोचक शीर्षकहरूमा पनि विमर्श गरियो । ‘राइट टु व्रिथ–द व्याटल फोर क्लिन एयर’ (हावा लिनुपर्ने अधिकार, सफा हावाको लागि युद्ध) भन्ने शीर्षकमा जयन्त सिंह, शसि थरुर र हेलेन कलारक थिए । भूमण्डलीकरण औद्योगीकरण र वजारमुखी जीवनशैलीले मानव अस्तित्व नै खतरामा रहेको वक्ताहरूले जिकिर गरे ।
कार्यकर्ममा क्वार्ड राष्ट्रहरू अष्ट्रेलिया, जापान, भारत र अमेरिकाका उच्च सैनिक अधिकारीहरू इण्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत सामुद्रिक सुरक्षा नीतिमा प्रकाश पारे । भारतको आन्तरिक राजनीतिमा पनि यथेष्ट विमर्श भएको पाइयो । युवा विद्वान् र चर्चित इतिहासकार विक्रम सामपथले भारतको राजनीतिमा व्यापक चर्चा सावरकरको बारेमा भइरहेको जानकारी दिए ।
जब कि अपेक्षाकृत रूपमा गान्धी, नेहरू पटेलमा बढी पुस्तक लेखिए तापनि चुनावमा सावरकरमाथि बढी बहस भइरहेको लेखक विक्रमले उल्लेख गरे । एसियाना संवादमा प्रमुख वक्ताहरूमध्ये अफगानिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति हमिद करजाइ पनि एक मूर्धन्य थिए । करजाईले अफगानिस्तानको पीडा, विदेशी हस्तक्षेप र खाडी मुलुकहरूमा यसवाट पर्न गएको प्रभावको बारेमा चर्चा गर्दै अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणमा भारतबाट भइरहेको सहयोगलाई मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरे ।
संक्षेपमा रसियाना संवादको आयोजनाले विभिन्न विचारहरूको समुद्र मन्थन भएको छ । रसियाना संवादले पूर्वीय दर्शनका मान्यतालाई स्थापित गरेको छ । वौद्धिक चिन्तनले हरेक समस्यालाई शास्त्रार्थको माध्यमवाट समाधन गर्ने दिशा निर्देशन गरेको छ । यही मान्यताका साथ भारतले रसियाना संवादको आयोजना गरिरहेको देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ ९, २०७६, १४:११:००